आज सप्तमी ‘फूलपाती’ पौराणिक महत्व यस्तो - Aamsanchar
आज सप्तमी ‘फूलपाती’ पौराणिक महत्व यस्तो
नवरात्रको सातौँ दिन आज कालरात्रि देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती ९चण्डी०, श्रीमद्देवी भागवतलगायत देवी स्तोत्र पाठसमेत गरिन्छ । नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन् । नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ । यसरी १५ दिनसम्म नेपालीले बडादशैँ पर्व मनाउँछन् ।
म तपाईंलाई कोटी–कोटी प्रणाम गर्दछु, मलाई शक्ति दिनुहोस् !!
नेपाल एकीकरणपश्चात् नै गोर्खाबाट उठाइएको फूलपाती देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका महत्वपूर्ण शक्तिपीठहरूमा पु¥याउने चलन थियो । नेपाल एकीकरणदेखि नै एकता र सांस्कृतिक प्रतीक गोर्खा जिल्लासँग नेपालीको पहिचान जोडिएको छ । तसर्थ, गोरखाको फूलपाती विशेष हुने गर्दछ । काठमाडौंको हनुमान ढोकाको तलेजु भवानीको मन्दिरमा रहेको दसैँ घरमा पनि गोर्खाबाटै ल्याइएको फूलपाती धादिङ्ग जिल्लाको जीवनपुर हुँदै भित्र्याइने चलन थियो ।
गाउँ–घरमा माहौल पक्कै पनि रोमाञ्चक छ । मुग्लान पसेका साथीभाई आफन्तजन, प्रियजन आफ्ना गाउँठाउँमा कत्तिको फर्केका छन् रु शहर बस्नेहरू पनि गाँउठाउँ फर्केका छन् कि छैनन् रु कत्तिका आमाबुवा, दिदी बहिनी, दाजु–भाईका मन हर्षले गद्गद् होलान् त कति प्रतीक्षाका आँखा ओछ्याइ पर्खिबसेका होलान् ।
यो चाड सनातन हिन्दू मात्रको नभई तमाम नेपालीजनको हो, यसको मौलिक विशेषता भनेकै यही हो । तडक–भडक भन्दा पनि सामान्य जीवनशैली अनि असमान्य आत्मीयताका साथ चाड मनाउनुहोला । यो रमाइलो माहौलको शुभकामना !
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६२ जना कार्यकर्ता पक्रउ
October 21, 2021 16:32 PM